भगवान श्रीकृष्णले रोपेको मोतीको बोट: जसमा अहिले पनि पाइन्छ यस्तो मोति ! – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
भगवान श्रीकृष्णले रोपेको मोतीको बोट: जसमा अहिले पनि पाइन्छ यस्तो मोति !
कुरा द्वापरयुगको हो तर आज पनि राधा बिना कृष्णको नाम र कृष्ण बिना राधाको नाम अधुरो मनिन्छ ।
पौरानिक इतिहासले वर्तमान समयलाई अति नै सुन्दर साथ जोड्ने गर्छ । यस्तो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण ले रोपेको मोतीको बोट अहिले पनि छ –
यस्तो छ धार्मिक कथा ः
अधिकांश ले यहि सुन्दै आको छ कि कृष्णको हजारौ गोपिनी हरुमा राधाको नाम लिदैन । राधा बस कृष्णको प्रेमिका थियो । यी दुईको बिबाह असम्भब भएको थियो । तर कहिँ कहिँ यी दुबैको बिबाह ब्रह्म जीले गरेको थियो भन्ने पनि उल्लेख छ ।
श्री कृष्ण र राधाको संसारिक नाता थिएँन तर गर्ग संहिता, गौतमी तन्त्रका अनुसार यी दुबैको बिबाह भएको बर्णन गरेको सन्त महात्माहरुले बताएका छन् ।
पुराणका अनुसार गोबर्धन पर्बत उठाउने घटनाको केहि समय पछी श्री कृष्ण र राधा को इन्गेजमेन्ट भएको थियो ।इन्गेजमेन्टमा कृष्णले उपहार स्वरूप बेशकीमती मोति दिएका थिए । तेही बेला देखि यस्तो बोट उम्रेको थियो जसमा अहिले पनि मोति निस्की रहेको छ ।
गर्ग सहिताका अनुसार राधा र कृष्णको इन्गेजमेन्टमा राधाको पिता वृषभानुले उपहार स्वरूप कृष्णलाई बेशाकीमति मोति दिएको थियो । यो मोति उपहार पाएकोमा वासुदेव तनाबमा परेका थिए । यति महँगो मोति कृष्णले कसरि सम्हाल्ने होला भन्ने उनलाई डर थियो ।
श्रीकृष्ण ले उक्त मोतीलाई कुण्डको नजिक जमिनमा गाडी दिए । जब नंद बाबालाई यो कुरा थाहा भयो छोरा प्रति रिस उठ्यो । उनले केहि मानिसलाई त्यो मोति खनेर ल्याउन पठाए । तर जब उनीहरुले मोति गाडेको ठाउमा पुगे त्यहाँ एक बोट उम्रेको थियो ।
उक्त बोटमा मोति टल्की रहेको थियो । तब उनीहरुले मोतीलाई बैलगाडीमा हालेर नंदबाबा को घरमा पुर्याउए । तेही समय देखि आज पनि त्यो कुण्डको मोति कुण्ड कै नाम ले चिनिने गरेको छ ।
८४ कोषको गोबर्धन यात्रा गर्दा आज पनि पिलुको बोटबाट मोति खोज्न आउने गर्छ ।
यस्ता बिरुवा अरु ठाउमा पनि लगाएको छ तर यहि स्थानमा लगाएको बोट बाट मात्र मोति उत्पादन हुने गर्दछ । यात्रा गर्ने मानिसहरुले यो कुण्ड र कुण्डको आसपास मोतीको बोटलाई सजिलै देख्न सकिन्छ ।
भोजपुरमा प्रहरी टोलीको जवाफी कारवाहीमा विप्लवका कार्यकर्ता…
पाँचथर हत्याकाण्डको आशंकामा रहेका व्यक्तिको शव झुण्डिएको…
भारतलाई जितेर फाइनलमा पुगेको साफ यु १८ महिला च्याम्पियनसीपमा नेपाल उपविजेता
पाठकको पुर्पुरो : कार्यसिद्धि होस् – २०७५ असोज २४ गते बुधबार